Aluminium Discs na Aluminium Circle For Utensils - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co, Ltd
Aluminium Discs na Aluminium Circle For Utensils
Ny tombony amin'ny rakitsoratra Aluminium Aluminium & Aluminium
1) Hign ny kalitaon'ny sary hoso-doko ./Hery kalitao sy serivisy.
2) Profesora sy manokana ho an'ny 10 taona.
3) Fine finish / Dimensional accuracy / Strong construction / Resistance resistance and durable.
4) Fisehon'ny ankamaroan'ny fifantenana amin'ny haben'ny faribolana, anisan'izany ny endriky ny endrika sy ny habe.
5) Manome kirantsary matevina miaraka amin'ny hateviny mandrapahatonga ny 6mm matevina izay tsara ho an'ny cookware.
6) Anodizing Quality sy Deep Drawing Quality izay mety ho an'ny Cookware koa.
7) Fiarovana tsara voaaro, mendrika ny fahafaham-po.
8) Sary manintona lalina sy manatsara ny kalitao.
9) Ny orinasan-tsika dia manana tadin-dàlam-pandrindrana telo, raha ampitahaina amin'ny dingan'ny fitrandrahana fandrefesana fandrehitra, ny famokarana ny famokarana ny famokarana dia manatsara ny fahombiazan'ny fanasitranana, ny famokarana fohy dia fohy, ary ny fahombiazan'ny trano dia tsara kokoa noho ny vokatra nentina nentim-paharazana.
Fampiharana: fitaovam-pihinanana, fitaovana, fitaovam-piadiana, trafika
Thickness: 0.5 - 6mm
Vita: 100 - 1200mm
Fanaovana fitsaboana: Mangatsiaka mangatsiaka sy mafana
Tapaka ny sisiny: Tsy misy sisiny tsy misy sisiny
Fitsaboana amin'ny surf: Anodized, vita tsara
Fanamarinana: BV, SGS, ISO9001
Sakafo sy Fitaizana
fonosana: Ny tobim-pamokarana aluminium dia ho feno fonosana fananganana tahirin-tsoavam-pandaharam-bato ivelany / carton. Ny boribory aluminium dia feno fonosana feno filibana, kraft paper, duriang, karatra karatra, ary avy eo afokasoka amin'ny alàlan'ny vy. Ny hazo palmie dia hihosotra ary ny palette dia natao ho an'ny haben'ny alim-borona.
Delivery: 20-25 andro aorian'ny fametrahana anao na LC.
1) Fanaraha-maso akaiky kokoa
Ny foto-drafitr'asa momba ny serivisy "FIFANEKENA MANOKANA" dia hiantoka ny valin-teninao ao anatin'ny ora 24. Mandritra izany, ny varotra dia hanaraka ny famokarana vaovao rehefa vita ny fikarakarana mba hahazoana antoka fa ny alim-borona sy alim-by Aluminum dia mifanaraka amin'ny fangatahanao. Ankoatra izay, dia hanome tolotra ara-dalana mahaleotena isika mba hitazonana ny fiaraha-miasa maharitra.
2) Ambony ambony
Ny zava-bitika nataonay dia efa niasa tamin'ny rakitra Aluminium & Aluminium Aluminium nandritra ny taona 10. Nanangana fitsipika henjana henjana izahay ary namolavola ekipa manana traikefa lalina. Amin'ny alàlan'ny politikan'ny orinasa, ny tsangam-baton'ny Aluminium & Aluminium Aluminium dia hovokarina sy hikirakira ho an'ny tenany ho an'ny mari-pahaizana marina.
Mba hanaovana famerenana mazava kokoa, azafady, ilazao ny toetoetr'io faribolana io ho antsika, toy ny Alloy sy ny fifehezana, ny habeny, ary ny habetsahana.
Rehefa avy ny antsipiriany rehetra, anisan'izany ny Sample, Packaging & Delivery, ny fe-potoana fandoavam-bola dia atolotra ho antsika mahafa-po antsika, handeha amin'ny famokarana betsaka isika ary hifandray hatrany aminareo momba ny dingana arahina.